Magweta Anorwira Kodzero Obatsira Vagari Vane Zvikwereti kuHCC
Ndira 11, 2017
A representative of the commuter omnibus operators, Shem Mberi, said they would co-operate with council in its endeavors to decongest the city. (Photo: Combined Harare Residents Trust)
Magweta anorwira kodzero dzevanhu, eZimbabwe Lawyers for Human Rights, atanga kumirira vagari vemuHarare vakaendeswa kuvanhu vanotevera zvikwereti kana nenyaya yezvekwereti kukanzuru yeHarare
Magweta anorwira kodzero dzevanhu, eZimbabwe Lawyers for Human Rights, atanga kumirira vagari vemuHarare vakaendeswa kuvanhu vanotevera zvikwereti kana nenyaya yezvekwereti kukanzuru yeHarare.
Magweta aya audza vagari ava kuti vasiyane nekambani ye Well Cash iyo iri kutevera zvikwereti zvekanzuru.
Vagari vanzi vataure nekanzuru kuti vangabhadhare chikwereti chavo sei kana vachibvuma kuti vane chikwereti.
Kanzuru yeHarare yakadoma kambani yeWell Cash kuti itevere zvikwereti zvayo kuvagari uye kubvira muna Zvita gore rapfuura, kambani iyi yange iri kutyityidzira vagari nekuvanyorera matsamba ekuti vachatorerwa dzimba dzavo nemimwe midziyo kana vasina kubhadhara chikwereti.
Kunze kwekubhadhara chikwereti, kambani iyi inozodawo kuti vagari vabhadhare chidimbu chezvikamu gumi kubva muzana zvechikwereti chavo semubhadharo wayo.
Kunyange hazvo vamwe vakatotanga kubhadhara vamwe havasati vatanga kubhadhara uye vasati vabhadhara vatanga kuwana rubatsiro kumagweta anorwira kodzero dzevanhu.
Vachitaura nevagari ava kumuzinda weZimbabwe Lawyers for Human Rights, gweta rinoshandira sangano iri, VaSharon Hofisi, vati vagari havafaniri kutya maDebot Collectors sezvo asina mvumo yekutora midziyo yavo.
VaHofisi vaudza vagari ava kuti zvakakosha kuti kana vachinge vawana masamanisi anobva kumatare vapindure pamwe nekuenda kumatare.
Asi VaHofisi vati zvakakosha kuti kuti vagari vabhadharewo mabhiri avo nemitero kunzuru.
Vamwe vevagari vakanyorerwa matsamba vakwegura zvekuti havana kwavanokwanisa kuwana mari.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare, VaMichael Chideme, vaudza Studio 7 kuti vana sorojena vanobhadhara mitero yakaderera uye vanofanira kuenda kumahofisi ekanzuru nehumbowo hunoratidza kuti vakwegura uye kuti ndivo vanogara paimba yavanobhadharira mutero.
VaChideme vaenderera mberi vachiti kanzuru icharamba ichiendesa vagari kumaDebt Collectors uye vanenge vasingade kutorerwa matanho aya vanofanira kuenda kumahofisiekanzuru munzvimbo dzavo kuti vandotaura kuti vachabhadhara chikwereti chavo sei.
Zvichakadai mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nekanzuru yeHararezvakashata uye sangano ravo richaramba richidzidzisa vagari kuti vasashande nemakambani anotevera zvikwereti.
Vati kambani yeWell Cash inofanirawo kurwiswa.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vekambani yeWell Cash kuti timwe divi ravo panyaya iyi.
Vagari, mabizimisi pamwe nehurumende vane chikwereti chemari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kukanzuru yeHarare.
Kanzuru yeHarare inoti kana ikawana mari iyi inokwanisa kuita basa rayo zvakanaka izvo zvinota kuti ikwanise kutakura marara nekupa vanhu mvura nezvimwe zvinofadza vagari.